Isibhengezo esisemthethweni sokuQiniswa kweziFundo
Kubafundi nabazali Ukugqweswa kunye neNgaphezulu
Awukwazi ukungahambi kakuhle ngesibhengezo esiklasi
Ukubhengezwa kwakho isaziso sokugqweswa kweziqu kunokubonakala ngathi ngumngeni omncinci, kodwa ngumsebenzi onokuthatha ixesha lakho (elixabisekileyo) ixesha. Ukuhamba ngokusemthethweni, ulwimi lomthonyama yindlela enye yokuqinisekisa ukuba ukuvakalisa kwakho ngokuchanekileyo kubonisa ukubaluleka kunye nenani lakho yonke imisebenzi yakho nzima. Ngaphambi kokuba ubhale isimemezelo sakho esisemthethweni, kubalulekile ukuphonononga imithetho emiselweyo yokuziphatha kwanoma yiluphi uhlobo lwesibhengezo sokugqiba, olusemthethweni okanye ngenye indlela.
ImiGaqo yeZaziso zokuQeqesha
Into yokuqala yokwenza isigqibo ngaphambi kokuba ubhale isimemezelo sakho ngubani omele ukumema, okanye ukuba uzimisele ukumema nabani na. Ngokungafani nokugqweswa kwezikolo eziphakamileyo, akusiyo wonke umntu oya kumbhiyozo wokuqalisa okanye alindele iphathi. Akuqhelekanga kubafundi abaqeshwe kwiikholeji ukuyeka umhla kunye nendawo yokugqweswa kwisigidimi. Oku kungabonakala kungaqondakali, kodwa kulo mzekelo, isimemezelo siwukuthi: isimemezelo sempumelelo yakho.
Ukuba unenjongo yokwamkela iindwendwe kwisiganeko sokugqiba iziqu, kuya kufuneka uquke iincwadana ezimbalwa ezibalulekileyo zolwazi:
Ikholeji okanye iyunivesithi
Iqondo oye lazuza
Umhla wokuqalisa (okanye umcimbi) umhla kunye nexesha
Indawo yomcimbi okanye iqela
Isibhengezo esisemthethweni sokuthobela izibhengezo, isalathisi ithatha i-tone ecacileyo, isetyenzisiweyo, ngokuqhelekileyo ukukhankanya umongameli wekholeji okanye iyunivesiti, ubugcisa kunye neklasi ephumelela njengamaqela ngokwenene abamema indwendwe ukuba baye khona.
Le mibutho emithathu, ngokwenene, ibamba isiganeko kwaye iseza isimemo esisemthethweni kwiindwendwe zakho egameni lakho.
Isibhengezo seSampula seSigqibo
Emva kokuba uqokelele ulwazi oluyimfuneko-soloko uqinisekisa ukuba uyayazi indlela upela ngayo igama lomongameli wekholejini, umzekelo-kuquka indawo, ixesha, kunye nomhla, ulungele ukubhala isimemezelo sakho sokugqiba .
Ingcaciso engezantsi ibonisa isampuli esisemthethweni. Ungathatha indawo yeenkcukacha kubazali kubafundi kunye neenkcukacha ezicacileyo kuwe. Ukongezelela, qela isikhalo kwisibhengezo sakho.
UMongameli, iCandelo leCandelo leCandelo lokuQeqesha
(Iikholeji ze-XX okanye iYunivesithi
Iqhayiya livakalisa ukuphunyezwa kwezifundo
(Igama lakho elipheleleyo, kuquka igama lakho eliphakathi)
(Umhla, umhla-ophelelwe usuku-kunye nenyanga)
(Isihloko apho ufumana iqondo lakho)
(Isixeko kunye nombuso)
Qaphela ukuba kwisibhengezo esisemthethweni, awuyi kuthetha into enje, "Ndingathanda ukumema." Ekubeni uyilungu leklasi eligqibeleleyo, ngokuqinisekileyo uqukwa kwiqela elibamba isiganeko, kodwa akufanele uzinge ngokwakho ekwandiseni isimemo.
Kunokukunceda ukubona ukuba isaziso esipheleleyo sokugqweswa kwezifundo siya kubonakala njani. Zive ukhululekile ukusebenzisa ifomathi kunye negama elingezantsi. Ukutshintsha nje igama lekholeji, i-graduate, degree, kunye nezinye iinkcukacha ngolwazi oluchanekileyo.
NgeCawa, ngomhla we-19 kaMeyi
Amabini amabini aneshumi elinesibhozo
IsiGanga soBugcisa boBugcisa
KwiSizwe seMidlalo yaseHoland
Ngehora lesi-2 ntambama
Ukuqalisa isicatshulwa nokupelisa ulwazi oluqhelekileyo elifingqiweyo-njengoluhlobo lwesidanga, umhla kunye nexesha-kunika isimemezelo esihle, isikhalazo esisesikweni. Sebenzisa le fomathi kwaye uya kuqinisekiswa ukuba ugxininise iindwendwe zakho kungekuphela kwempumelelo yakho, kodwa kunye nendlela obabamema ngayo ukuba babhiyozele kunye nawe.
12 ImiSebenzi yezeNzululwazi yezoPolitiko
Izipho zoMsebenzi weeKholeji zeeKholeji
Okokungazigqokanga kwiSuku lokuQiqesha
Izipho zokuQinisa zeKholeji ze-Classic
Imbali emfutshane ye-Anime
Iingcebiso ezili-10 zokukhanga ii-Butterflies kwi-backard yakho
Iintlobo zeMigodi e-Igneous
Ukuqokelela i-Elvis Presley Imemorabilia kunye ne-Collectibles
Imfazwe YaseMelika: I-Admiral David Dixon Porter